Budata Dr.Web LiveDisk maka Windows
Budata Dr.Web LiveDisk
Free Budata maka Windows (36.73 MB)
Budata Dr.Web LiveDisk,
Enwere ike ịkọwa Dr.Web LiveDisk dị ka mmemme mgbake kọmputa nke ga -enyere gị aka weghachite data gị mgbe kọmputa gị ghọrọ ihe na -adịghị mma nihi nje.
Dr.Web LiveDisk, nke bụ ngwa mgbake sistemụ nke ị nwere ike ibudata ma jiri nefu na kọmputa gị, na -enye gị ohere ọzọ iji jiri kọmputa gị mgbe sistemụ arụmọrụ Windows gị anaghị arụ ọrụ na anaghị emepe. Site na ngwa a, ndị ọrụ nwere ike rụọ mwepụ nje site na inyocha nje na kọmputa ha. Dr. Ekele maka mmemme a, nke na -ewe ike nyocha teknụzụ na teknụzụ nhicha, ị nwekwara ike kwado ma weghachite faịlụ dị mkpa echekwara na kọmputa gị. Ọ bụrụ na ị ga -ahazi kọmputa gị nihi ọrịa nje, ị nwere ike iji Dr.Web LiveDisk wee gbochie faịlụ gị dị mkpa ka ọ ghara ịla niyi nihi nhazi.
Enwere ụdị nsụgharị abụọ nke Dr.Web LiveDisk. Ọ bụrụ na ị ga -eji nchekwa USB dị ka usoro mgbake sistemụ, ị nwere ike budata ụdị USB nke Dr.Web LiveDisk site na njikọ nbudata anyị. Ngwaọrụ ndị a nwere ike gbanwee ebe nchekwa gị ma ọ bụ diski mpụga ka ọ bụrụ mgbasa ozi mgbake. Ka ijiri mgbasa ozi USB a, BIOS kọmputa gị ga -akwado booting na ngwaọrụ USB.
Ụdị ọzọ nke Dr.Web LiveDisk bụ ụdị CD/DVD nke Dr.Web LiveDisk. Ọ bụrụ na ị nwere motherboard ochie na BIOS, anyị na -akwado iji ụdị a. Ịnwere ike ibudata ụdị CD/DVD nke Dr.Web LiveDisk site na njikọ ọzọ anyị, ebe bọọdụ nne ochie na -akwado ịkwalite booting na CD ma ọ bụ DVD.
Dr.Web LiveDisk Ụdịdị
Nha faịlụ: 36.73 MB
Mmepụta: Dr. Web